अर्बपति उपेन्द्रका ज्वाइँ तथा उपप्रधानमन्त्री रघुवीर ‘गरीव’, उनकी श्रीमती जुलीसँग अर्बौ सम्पत्ति !
नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य एवं उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री रघुवीर महासेठको राजनीति यात्रा यति छिटो भयो कि एमालेभित्रै पनि धेरै नेताहरू आश्चर्यमा पर्छन्।
केन्द्रीय सदस्य भएपछि पोलिटब्यूरो सदस्य नभइ स्थायी कमिटी सदस्य बनेका महासेठ कसरी यति शक्तिशाली बने? महासेठको राजनीतिक छत्रछाँयाका पछाडि कसको हात छ?
‘यो प्रश्नको उत्तर सहज छ, रघुवीर महासेठ धनाढ्य अर्बपति उपेन्द्र महतोका ज्वाइँ हुन्, महासेठको राजनीतिक उचाइँका फ्याक्टर हुन् महतो,’ नेकपा एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने।
अर्बपति महतो नेपालको राजनीति र भूराजनीतिक रुपमा पनि प्रभाव राख्ने ती स्थायी कमिटी सदस्यले बताए। ‘एमाले पूँजीवादी र पूँजीपतिहरूको झुण्डमा रुपान्तरण हुँदै गर्दा पार्टीमा योगदान गर्नेहरू पाखा लाग्ने र पैसाको शक्तिमा अघि बढ्नेहरू प्रभावी हुने गर्छन्,’ ती नेताले भने।
महासेठको पछिल्लो सिंहदरबार यात्राले राजनीतिक रुपमा केही गम्भीर प्रश्नहरू सिर्जित भएका छन्। अपितु, ती प्रश्नहरूको उत्तर विस्तारै आउने नै छन्।
यो रिपोर्टमा चाहिँ उपप्रधानमन्त्री महासेठको सम्पत्ति विवरण विस्तृतमा प्रस्तुत गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ चैत २ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा रघुवीर महासेठ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका थिए।
मन्त्री बनेपछि एमाले स्थायी कमिटी सदस्य महासेठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा रघुवीरभन्दा उनकी श्रीमती एवं पूर्वमन्त्री जुलीकुमारी महतो धनी देखिएकी छिन्।
महासेठले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भएपछि २०७५ साल वैशाख १९ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति बुझाएका थिए।
त्यसो त २०७७ पुस १० गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा जुलीकुमार महतो मन्त्री बनेकी थिइन्। उनले महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन्।
कति छ यी धनी मन्त्रीको सम्पत्ति?
उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री भएपछि महासेठले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। २०७४ चैत २ गते मन्त्री हुँदा महासेठले बुझाएको सम्पत्ति विवरणअनुसार उनको अधिकांश सम्पत्ति श्रीमती जुलीकुमारीकै नाममा छ।
अहिलेको मन्त्रिपरिषदमा पनि सबैभन्दा धनी मन्त्री महासेठ नै हुन्। महासेठले बुझाएको सम्पत्ति विवरणअनुसार धनुषाको जनकपुरधाम–९ मा साढे २ तले घर छ। जुन जुलीकुमारीको नाममा छ।
त्यसैगरी ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर–२५ मा साढे २ तले घर छ। त्यो घरको मालिक पनि जुली नै हुन्।
त्यसैगरी, धनुषामा ८ विगाह र सिन्धुलीको ५ कठ्ठा ३ धुर जग्गा जुलीकुमारीकै नाममा छ। ललितपुरमा २ रोपनी १३ आना ३ पैसा १ दाम तथा धोवीघामटमा १ रोपनी ७ आना र धनुषा जनकपुरधाम–९ को ५ कठ्ठा १५ धुर जग्गा पनि जुलीको नाममै रहेको महासेठले उल्लेख गरेका छन्।
त्यसैगरी, पूर्वमन्त्री जुलीकुमारीको नाममा कर्पोरेट बैंक २ करोड ५० लाख, लक्ष्मी बैंकमा १ लाख ५० हजार, गुडविल फाइनान्समा ७० हजार शेयर, एनभीपीएल प्रालिमा ३७ करोड, महिला अधिकार तथा विकास केन्द्र ५० लाखको शेयर रहेको महासेठले खुलाएका छन्। त्यसैगरी, केही बैंकबाट जुलीकुमारीको नाममा २१ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका पनि महासेठले खुलाएका छन्।
नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य हुन् रघुवीर महासेठ। अर्बपति उपेन्द्र महतोका ज्वाइँ महासेठ एमाले नेतृत्वलाई ठूलै ‘रकम’ बुझाएर राजनीतिमा फट्को लगाउन सफल भएका हुन्।
स्थायी कमिटी सदस्यलाई चाहिने क्याइटएरिया महासेठका लागि लागू भएन। एमाले अध्यक्ष ओलीले सिधै स्थायी कमिटी सदस्य बनाए। रघुवीरकी श्रीमती जुली महतो महासेठ पनि एमालेकी सांसद् हुन्।
शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टी जसपा सरकारमा सहभागी हुने भएपछि ओलीले फेरि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे। यसअघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहेका महासेठलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए। र, जुलीकुमारी मन्त्री पदबाट बिदा भइन्।